Maxaa looga hadlay kulankii Baydhabo uu kula yeesha RW Khayre Wafdi ka socda QM iyo Bankiga adduunka? +SAWIRO | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa looga hadlay kulankii Baydhabo uu kula yeesha RW Khayre Wafdi ka...
Maxaa looga hadlay kulankii Baydhabo uu kula yeesha RW Khayre Wafdi ka socda QM iyo Bankiga adduunka? +SAWIRO
Baydhabo (Halqaran.com) – Ra’iiusul Wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay kaaliyaha xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha bini’aadninimada, Mark Lowcock, kaaliyaha xoghaha guud ee qaramada midoobay ee taageerada dhismaha nabadda, Oscar Fernandez-Taranco iyo madaxweyne ku-xigeenka sare ee Bangiga adduunka, Mahmoud Mohieldin oo Baydhabo booqasho ku yimid.
Kulanka dhex maray RW Khayre, Mark Lowcock, Oscar Fernandez-Taranco iyo Mahmoud Mohieldin oo ay goob joog ka ahaayeen madaxweynaha Koonfur Galbeed, qaar kamid ah wasiirrada XFS iyo Koonfur Galbeed ayaa looga hadlay xaaladaha bini’aadninimo ee dalka, dhismaha nabadda, qorshaha deynta looga cafinayo Soomaaliya iyo fulinta mashaariic horumarineed.
Mr. Kheyre ayaa mas’uuliyiinta uu kulanka la qaatay waxa uu warbixin ka siiyay horumarradii dowladdu ka gaartay arrimaha dib-u-heshiisiinta, xaaladda deegaannada Koonfur Gableed ee socdaalka uu ku tegay, waxa uuna la wadaagay sida ay lagama maarmaanka u tahay in gargararka loo bedelo mashaariic horumarineed oo bulshada wax tar u leh, si loogu diyaar garoobo xalka waqtiga fog ee dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
DAAWO MUUQAAL: Axmed Madoobe oo si kulul u weeraray Madaxda DF Somaliya una hanjabay (Maxaa cusub)?
XOG HOOSE: Beesha uu ka dhashay Farmaajo oo qarka u saaran isku dhacyo salka ku haya xariga Wasiir Janan
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale ku dhiirri geliyay hay’adaha caalamiga ah in ay taageero deg deg ah iyo mashaariic horumarineed ay la gaaraan deegaannada laga xureeyo argagaxisada, si bulshadu ay uga soo kabsato dhibaatooyinka kasoo gaara ficillada iyo dhaqamada gurracan ee kooxaha nabad diidka ah.
kula yeesha RW Khayre
Wafdi ka socda QM